Goverana mafaera pakati peIOS neAroid neAirDroid | IPhone nhau
Goverana mafaera pakati peIOS uye Android neAirDroid
Mune zera rekutumira mameseji masevhisi, kuendesa mafaera zvakananga pakati pemidziyo kunenge kusisina basa. Kunyangwe nguva zhinji tiri kurudyi padyo nemumwe munhu tinotumira mafoto kana zvinyorwa kuburikidza neemail kana WhatsApp, iyo dzimwe nguva inosununguka asi dzimwe nguva ine zvayakaipira izvo zvisingawanzo kuzivikanwa kune vese, sekurasikirwa kwemhando yemufananidzo.
Avo vedu vane Apple zvishandiso vanogara vaine AirDrop, chishandiso chisina kuzivikanwa zvachose kune vazhinji asi icho chiri kukurumidza uye kugadzikana, uye zvakare chinochengetedza mhando yemifananidzo nemavhidhiyo zvisina kusimba. Asi chii chinoitika kana tichida kuendesa chimwe chinhu kubva kune yedu iPhone kuenda kune Android chishandiso? Kana kukombuta? AirDroid iyi application nyowani yatovepo muApp Store iyo yemahara uye inogadzirisa dambudziko iri kwatiri.
NaAirroid, kugovana mhando dzese dzefaira pakati pezvigadzirwa zvedu kutamba kwevana. Iwe unongofanirwa kubvunza uyo anogamuchira iyo faira kuti avhure iyo application, isu tinoivhura uye tomirira iyo kuti ione otomatiki kuti iwo madhizaini ari padyo uye akagadzirira kuendesa. Kubva pano iwe unongofanirwa kusarudza izvo zvatinoda kutumira uye nekumirira masekondi mashoma kuti mafaera akopisirwe kuchinoenda mudziyo. Iko kuendesa kunogona kuve nzira mbiri kubva kuIOS kuenda kuAlex kana kubva kuAroid kuenda kuIOS. Nenzira imwechete uye nekutenda kune iyo kushanda pakombuta tinogona kuchinjisa kune PC yedu kana Mac.
AirDroid ndeye mahara, asi inosanganisira zvimwe zvekunyorera-zvakavakirwa zvekubhadhara maficha, senge kugona kudzora mafaera pane ako madhiraivhu kubva chero kupi uchishandisa webhu browser. Android ine mamwe mabasa, asi sZvichava zvakaoma kwavari kuti vasvike kuIOS nekuda kwezvirambidzo zvatinoziva tese kuti Apple inomisikidza kune vechitatu-bato kunyorera. Zvakadaro, kungoendesa mafaera kune chero chimwe chinhu chisina kunetsekana, zvakakodzera kurodha pasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Goverana mafaera pakati peIOS uye Android neAirDroid
Sergio mayorga akadaro
Ini ndinoda Tumira Kwese kupi uko kuri kwemahara pasina kushambadza uye kuri nyore kushandisa. Iyi yeWindows, ios, Android uye ini handizive chero imwe.
Pindura Sergio Mayorga
Ini ndakakwanisa kuidhawunirodha kubva kuAppStore yeIOS, account yangu inobva kuUSA handizive kana iri mune vamwe, asi kana iripo.
Sago Mini Monster, yemahara kwenguva shoma